Search box ခေါ်မရတော့လျှင် ပြန်ဖေါ်နည်း
1.Start >> Run (Win+R)>>>>> gpedit.msc ကို type >>> OK ပေးလိုက်ရင် Local Group Policy Editor box ကျလာပါလိမ့်မယ်
2. အဲ့ဒီbox ထဲမှာ User Configuration >>> Administrative templates>>> Start Menu and Task Bar >>> Remove Search menu from Start menu ကိုတွေ့၇င် right click နှိပ်ပြီး Edit ကိုရွေး>>> options3ခုတွေ့ပါမယ်
Posted by Casino Prince
No Delete Virus သတ်နည်း
No Delete အမည်ရှိ files များထုတ်ပေးသော virus တစ်မျိုးအား ပြည်တွင်း computer များတွင်တွေ.ရှိလာသည်ဟု ကွန်ပျူတာများ အား အတတ်နိုင်ဆုံး windows ပြန်မတင်ပဲ
virus သတ်ပေးနေသော Mr.Htet Virus Lab; မှ သတင်းရရှိခဲ့ သည်..။
၄င်း worm virus မှာ 53248 bytes ရှိပြီး system 32 folder အောက်တွင် wcynsvc.exe နှင့် wcynsvc.ocx ဟူသော အမည်ဖြင့်နေရာ ယူထားပြီး...အခြားသော virus များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော file ဝှက်ခြင်း ၊ Task Manager ၊ Folder Options နှင့် Registry editor ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းများကိုလုံးဝ မလုပ်ပဲ စက်အတွင်း၌ virus မှရှိသကဲ့ သို.ဟန်ဆောင်နေတတ်သည်..။ထို.အပြင် windows services အတွင်း၌လည်း "Windows Net ware work information setup keep" ဟူ၌ အများမထင်မှတ်နိုင်လောက်သော အမည်ဖြင့် နေရာယူကာ အလုပ်လုပ်တတ်ပြီး အခြားသော Memory Sticks ,Flsah Drives များတတ်ဆင်လိုက်သောအခါတွင်လည်း 'No Delete' ဟူသော Folder ပုံစံပြုလုပ်ကာဝင်ရောက်ပြီး အမှန်မှာ Application file ဖြစ်ကာ user များမှားယွင်းဖွင့်မိစေရန် ရည်ရွယ်၌ ဤကဲ့ သို.ယောင်ဆောင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည် ။
window ကိုအလှဆင်ဖို့ sidebar လေးပါ
၀င်းဒိုးကို အလှဆင်ဖို့ အတွက် ၀င် ပုံလေးကိုသာ ကြည့်ပါ ကြိုက်ရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာသာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
USB Memory Stick တကယ်ပျက်.မပျက် စစ်ဆေးပေးမယ့် Software
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Memory Stick တွေ၊ MP3,4 စသဖြင့် USB နဲ့
ဆက်နွယ်တဲ့ Devices တွေမှာ Data တွေထည့်လို့မရတာမျိုး..Format ချမရတာမျိုးတွေ
ဖြစ်တတ်ပါတယ်.သာမန် Format ချမရခြင်း..Format ချလိုက်လျှင် အောက်ခြေက
TaskBar ပေါ်မှာ Windows was unable to format..စသဖြင့် စာသားများပေါ်နေခြင်း စသည်တို့အတွက် စစ်ဆေးပေးမယ့် Software လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Software လေးဟာဆိုရင် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး..ပျက်ပြီထင်လို့ပစ်ထားလိုက်တဲ့ Stick
တွေကို စစ်ဆေးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပြန်ကောင်းသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်.။
Software ကိုအရင် Download ချပါ။ ပြီးရင် Install လုပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ စစ်ဆေးလိုတဲ့Stick ကိုစက်ထဲမှာထိုးထားပါ။ ပြီးရင် Software ကို Run လိုက်ပါ။
Select flash drive/card: နေရာမှာ မိမိထိုးထားတဲ့ Stick ရဲ့ Drive letter ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ Select test type ဆိုတဲ့နေရာမှာ Read ဆိုတာကိုအရင်ရွေးပြီး
Start test ကိုကလစ်လိုက်ပါ။ အောက်မှာအရောင်တွေနဲ့စတင်စစ်ဆေးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းတွေပဲပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းသေးတယ်.မပျက်သေးဘူးပေါ့..ပြီးဆုံးအောင် စစ်ဆေးပြီး Format ချရင် ကောင်းသွားပါမယ်။ အနီ၊ပန်းရောင်၊အ၀ါ တို့ကများနေမယ်ဆိုရင်
တော့ သိပ်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး..တူနဲ့ထုဖို့နီးလာပြီပေါ့..:P စတာပါ..အဲလိုအရောင်တွေများနေပြီဆိုရင်တော့ Select test type နေရာမှာ Write,read and compare ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီး..Start test ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ။
Data တွေပျက်သွားမယ်လို့စာသားပေါ်လာရင် Yes ကိုသာကလစ်ပေးပြီးဆက်စစ်ပေးလိုက်ပါ
ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Stick ကောင်းရင်ကောင်းသလို စစ်ဆေးတာ မြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Stick ကိုဖွင့်ခြင်း..Data ထည့်ခြင်း..စက်မှဖြုတ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်.ပျက်သွားတတ်ပါသည်
တကယ်လို့ အစ်ကိုအမတို့ရဲ့Stick ဟာ USB Write-Protection Error ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်
တော့ စစ်ဆေးလို့ရမည်မဟုတ်ပါ။အဲဒီအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမယ် Click
ကျနော်လည်း ကျောင်းက အရမ်းကို နှိပ်စက်နေလို့ စာတောင် မရေးနိုင် ဖြစ်နေရတာပါ။ စာမေးပွဲကလည်း နိုဝင်ဘာ ၁၄ ဆိုစပြီ .. ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ မှပြီးမှာ .. ကျောင်းစာမေးပွဲပြီးရင်တော့ အတိုးနဲ့ ကြိုးစားရေးပေးပါ့မယ်။ ရေးဖို့ စုထားတာလည်း အများကြီးပဲ။ တခြို့ဆို upload တောင် တင်ပြီးပြီး share ဖို့ နားလည်ပေးကြပါဦးဗျာ။ အဟောင်းလေးတွေ ရှာဖတ်ရင်းပေါ့ …. ကျေးဇူးပါ.။
ညီလေး ကြေးစားလေး ဆိုဒ်မှ post လေးပါ ပြန်လည် မှတ်တမ်းတင် ပေးလိုက်ပါတယ် တကယ်လို့
ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြေးစားလေး ကိုသွားပီး ကျေးဇူးတင် စကားလေး ပြောပေးပါနော်
နောက်ဆုံးထွက် USB Disk Security 2012 (Full Version)
USB Disk Security ဆိုမှတော့ ထွေထွေထူးထူးရှင်းပြပေးဖို့ မလိုအပ်ဖူး
လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Version အသစ်လေးမို့ သူငယ်ချင်းများသုံးနိုင်အောင် ဦးဦးဖျားဖျားတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Full Versionလေးတင်ပေးထားပါတယ်။
အောက်က Link မှာ အလွယ်တစ်ကူဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေ
ကြပါစေဗျာ။ ချစ်ညီလေး ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာ) ဆိုဒ်လေးမှ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်
This method has two main steps, one is to addacode to the template <Head>...</Head> region, so that you can use this anywhere [in posts, as well as widgets] in the blog.
Then the second part of the code has to added in the body region (wherever you want to hide text/images in this way).
Log in to Blogger, go to "Layout", click on "Edit HTML" tab.
Now find for this code: </Head>
Now wherever you want to show this type of text, add code like this:
As requested by jhevie, here's the method to add this hack two times in your blog !
Once you have done the process described above, do this:
Then immediately BEFORE this code, paste this:
Similarly you can add any number of times, by changing the code in red to toggle3(), toggle4() etc.
But if you add it many times, then it may slow down your blog !
Rapidshare ကဖိုင်တွေကို ကြိုက်သလောက် Free Download ဆွဲလို့ရတဲ့နည်းလေးပါ
အသုံးဝင်တဲ့ Keyboard Shortcuts (100)
shortcuts key လေးတွေသိထားတော့ ဘာပဲပြောပြော သုံးရတယ် လွယ်သလိုအချိန်ကုန်လည်းသက်သာပါတယ် ...မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် ပါ..အောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်..
Posted by ဂျိုကာ
format တော်တော် စုံတယ်ဗျာ ကိုယ်တိုင်
Program အတော်များများရဲ့ password တွေကိုရှာပေးနိုင်တဲ့ Passware.Kit.Enterprise.v9.7
Passware.Kit.Enterprise.v9.7.Build.1572 ကို Full Version လေးတွေ့တာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီဆော့ဝဲက Program အတော်များများရဲ့ Password တွေကိုရှာပေးနိုင်ပါတယ်.. All in One Password Finder လေးပါ..ရှာတာလဲမြန်တယ်.. စုံလည်းစုံတယ်.. ဘာတွေပါလည်းဆိုတာတော့မပြောတော့ဘူးနော်.. တော်တော်စုံလို့ပါ... gtalk , windows administrator password, win zip, win rar , web, အများကြီးပါပဲ....သုံးကြည့်လိုက်ရင်ကြိုက်ကြမှာပါ..
Latest Upload Myanmar Mp3
windows collections (4)
အား jupitar ကိုရင်မောင် ရေးသားပါသည် http://www.mediafire.com/?ememzwhndzm = Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေသိချင်ရင် http://www.mediafire.c...
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တော်တော်များများဆိုဒ်တွေကိုဝင်လို့မရဘူးဗျား..အဲ့ဒီတော့ ဘန်းကျော်ဆိုဒ်တွေကိုသုံးပြီးကျော်ရခွရတော့တာပေါ့....
HandyCafe ချစ်သူများအတွက် HandyCafe အသုံးပြုနည်းစာအုပ် (မြန်မာလို)
Cafezee သုံးရတာအဆင်မပြေတော့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် HandyCafe လေးကိုသုံးကြည့်ကြပါ.. free လည်းရတယ်..သုံးရတာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်.. ဘယ်လိုသုံး...
No Delete အမည်ရှိ files များထုတ်ပေးသော virus တစ်မျိုးအား ပြည်တွင်း computer များတွင်တွေ.ရှိလာသည်ဟု ကွန်ပျူတာများ အား အတတ်နိုင်ဆုံး windowsြ...
သင့် E-mail ထားခဲ့ပါ..အသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါမည်
Buy Shaving Products Online casino COUNTER WEB Online casinos with paypal Shaving Cream
Visitors on World